साताको ब्लगर: शेखर ढकाल (यात्री शेखर) - MeroReport
साताको ब्लगर: शेखर ढकाल (यात्री शेखर)
विगत १० बर्ष देखि मोरङ र सुनसरीमा रहेर पत्रकारिता गरिरहेका शेखर ढकाल साहित्य क्षेत्रमा यात्री शेखरको नामले कलम चलाउँदै आएका छन । उनले नेपाल गजल प्रतिष्ठानको अध्यक्ष र कलालय इटहरीको सदस्यको जिम्मेवारी पनि समालिरहेका छन ।
स्थायी बसोवास टकुवा ७ मोरङ भएका यात्री शेखर हाल इटहरी ५ सुनसरीमा बसोबास गरिरहेका छन । उनी भ्रमण गर्न र लेख्न निकै रुची राख्छन ।
आफ्नो ब्लगलाई रचनाहरुको संग्रह बनाएको र पत्रकारितामा लेखेका नौला र रमाइला बिषयका साथ-साथै तस्विरलाई समेत ब्लगमा समावेश गर्दै आएका यात्री शेखरलाई हामीले यस साता साताको ब्लगरको रुपमा प्रस्तुत गरेका छौँ ।
प्रस्तुत छ उहाँसँग गरिएको कुराकानी :
तपाईंको पेशाको बारेमा बताइदिनुस न ?
मेरो पेशा पत्रकारिता हो । २०५९ सालदेखि निरन्तर म यो पेशामा छु । २०५९ सालमा मोफसल साप्ताहिकबाट सुरु भएको पत्रकरिता ब्लाष्ट दैनिक, सप्तकोशी एफएम, प्रतिदिन दैनिक हुदै अहिले कारोबार दैनिक र रेडियो नेपालमा सुनसरी सम्वाददाता र कलेज टाइम्स मासिकमा समाचार सम्पादकका रुपमा कार्यरत छु ।
तपाईं सोसिअल मिडियामा कसरी प्रवेश गर्नुभयो ?
मेरो पेशा नै पत्रकारिता भएकाले मैले पत्रकारिता सुरु गरेसगैं सोसिअल मिडियामा प्रवेश गरेजस्तो लाग्छ । पत्रकारिताकै शिलशिलामा २०६४ सालदेखि सप्तकोशी एफएममा समाचार सम्पादक भएर काम गर्न थालेपछि इन्टरनेटको दुनियाँमा बढी समय बित्न थाल्यो । सुरुका दिनमा याहु म्यासेन्जर च्याट, हाइफाइभ आदि धेरै चलाइयो । त्यसपछि ब्लग, फेसबुक, ट्वीटरलगायतका सोसिअल साइटमा बढि सक्रिय भइएको छ । तर मुख्य त पत्रकारिता नै प्राथमिकतामा छ अरु बचेको समयमा चलाउने हो ।
ब्लगिङ कहिले देखि गर्न थाल्नु भयो ?
म सप्तकोशी एफएममा कार्यरत रहेका वेला २०६५ सालतिर मैले अनलाइन खबर भन्ने वेवपत्रिकामा वेला वेला समाचार पठाउँथे । त्यसवेला त्यसका सम्पादक शुरेश भुषालले देखाएको रेसुङ्गा ब्लगले मलाई लोभ्यायो । मैले शुरेशसगैं ब्लग बनाउन सिके र सुरुमा ब्लग डटममा ब्लग बनाएँ । मलाई त्यो त्यति मन परेन अर्निे ब्लग ब्लगस्पोटमा बनाएँ । त्यसमा पनि नाम मन परेन । बर्डप्रेसमा पनि बनाएँ बर्डप्रेस मलाइ सजिलो लागेन । फेरी ब्लगस्पोटमा अहिलेको ब्लग बनाएको हुँ अहिले यसलाई डोमेन लिएर चलाइरहेको छु । यसरी धेरैवटा ब्लगिङ् सुरु भयो ।
नहराउने, ननासिने, नजल्ने र नचोरिने डिजिटल डायरी भएकाले गर्दा ब्लगिङ दिनानुदिन लोकप्रिय हुँदैछ । आफ्ना भावनाहरु कापिका पानामा लेख्दा हराएर जान्छन् । अरुलाई देखाउने वेलामा भेट्न मुस्किल हुन्छ । ब्लगमा आफ्ना भावना विचारलाई संग्रह गरे राख्न सजिलो भएको छ आफ्ना साथीभाइ आफन्त जति टाढा भएपनि सजिलै देखाउन सकिने भएकाले ब्लगिङ गर्नुपछै भन्ने लाग्यो । अहिले त नेपालीहरुको इन्टरनेटमा पहुँको मात्रा पनि बढ्दो छ त्यसकारण व्लगिङको भविष्य पनि राम्रो बन्दै गैरहेको छ । ब्लगिङले गर्दा आफ्ना लेख रचना अरुका साइटमा वा पत्रिकामा प्रकाशन नगरे पनि पाठकहरु पाउन सकिन्छ ।
कति समय दिनु हुन्छ ब्लगिङमा ?
मैले ब्लगिङ सुरु गर्दा डिजाइन र नयाँ सामाग्री अपलोड गर्न धेरै समय ब्लगलाई छुट्याएको थिए । अलिे कामको व्यस्तताले गर्दा कहिले १५ दिनमा कहिले महिना दिनमा मात्र ब्लग अपडेट गर्ने गरेको छु ।
आफ्नो ब्लगमा के के समावेश गर्नु भएको छ ?
मैले ब्लगलाई खासगरि आफ्ना रचनाहरुको संग्रह नै बनाउँन खोजेको छु । र पत्रकारितामा मैले लेखेका नौला र रमाइला बिषयका साथ साथै तस्विरलाई समेत ब्लगमा समावेश गर्दै आएको छु ।
ब्लगिङ आफैमा पत्रकारिता पनि हो जस्तो लाग्छ मलाई । पत्रकारितामा पत्रकारले लेखेका या लेखकहरुले लेखेका लेख रचनाहरु सम्पादकले सम्पादन गर्दछन् । तर ब्लगमा संकलक, लेखक र सम्पादक आफै भएकाले आफुलाई लागेका सबै कुराहरु जस्ताको त्यस्तै राख्न र पाठक शुभचिन्तकसम्म पुर्याउन सकिन्छ । त्यसैले आफ्नो विचार अभिव्यक्त गर्ने स्वतन्त्रता ब्लगिङमा छ ।
तपाईं मुलधार पत्रकारिता गरीरहनु भएको छ । ब्लगिङ र मुलधार पत्रकारितामा के फरक छ ?
खासमा ब्लगिङ पनि पत्रकारिता नै हो । अहिले आएर नागरिक पत्रकारिता र न्यु मिडियाको चर्चा भैरहेको छ । ब्लगिङ पनि यस्तै पत्रकारितामा पर्छ भन्ने मलाई लागेको छ । फरक यत्ति हो मुलधारको पत्रकारिताका लागि संगठित समुह र संस्था अवश्यकता पर्छ भने ब्लगिङ एक्लो व्यक्तिबाटै सम्भव छ । यसकारण यी दुवैमा खास फरक पाइदैन । तर गुणस्तर र विश्वसनियताका लागि भने ब्लगर आफैले मेहनत गर्नुपर्छ । मुलधारको पत्रकारितालाइ सबैले विश्वास गर्छन भने ब्लगिङ विश्वसनिय हुनसकेको छैन ।
अहिलेको ब्लगिङ ट्रेन्डलाई कसरी हेरीरहनु भएको छ ?
हामीकहाँ धेरै ब्लगहरु लहडमा खोलिएका छन् । धेरैले ब्लग खोलेर पनि निरन्तरता नदिएको अवस्था छ । केहि ब्लगहरु निरन्तर छन् । तिनका पाठकहरु नेपालका चर्चित समाचार साइटहरु जत्तिकै छन् । धेरैजसो नेपाली ब्लगरहरुले आफ्नो ब्लगलाई पठनिय बनाउँन मेहनत नगरेको मैले पाएको छु । मुख्य समस्या भनेकै निरन्तर समाग्रीहरु अपलोड नगर्नु नै हो । कतिपय ब्लगरहरुले ब्लगलाई आफ्ना सिर्जना र कार्यलाई संग्रह गर्ने र अरु समक्ष पुर्याउने दरिलो माध्यम बनाएका छन् । पछिल्लो समय संघसंस्थाहरु समेत ब्लगमा आर्कर्षित भएका छन् । ब्लग प्रतिको आर्कषणले ब्लग बनाउको संख्या दिनानुदिन बढ्दो छ । यो संगसगैं ब्लगमा गुणस्तरियता र विश्वसनियताका कुरा उठेका छन् । धेरैले ब्लगमा जे पायो त्यहि प्रकाशन गर्ने क्रम पनि बढेको छ ।
ब्लगिङ गर्दा ध्यान दिनु पर्ने कुरा के हुन ?
ब्लगिङ गर्दा ध्यान दिनु पर्ने कुरालाई बुदाँगत रुपमा राख्न मन लाग्यो
२. बिषयबस्तु छनौट
३. प्रस्तुती र भाषशैली
अहिलेको प्राबिधिक युगमा नयाँ मिडियाको आकर्षण बढ्दो छ । यसको प्रयोग कसरी भइरहेको छ जस्तो लाग्छ तपाईंलाई ?
प्रविधिसगै नयाँ मिडियाको आर्कषण बढ्नु स्वभाविक हो । खासगरि मोवाइलले गर्दा इन्टरनेटको पहुँच कुना- कुना सम्म पुगेको छ । मोवाइलमै फेसबुक र ट्वीटर र मिग जस्ता सामाजिक संजालमा रमाउनेको जमात बढ्दो छ । युवा युवतीहरु मिग र फेसबुकमा घण्टौ हराउन थालेका छन् । यसैको प्रयोग गरेर धेरैले आफ्ना काम पनि सहज रुपमा सम्पन्न गरेका छन् । मानिसहरु भेला गर्न र सुचनाको चाँडो प्रवाहिकरणका लागि नयाँ मिडियाको प्रयोग भइरहेको छ । सामाजिक अभियान चलाउन र आपतमा परेकालाई सहयोग गर्न समेत नयाँ मिडियाको प्रयोग हुन थालेको छ ।
सुचनाको आदान-प्रदानमा नयाँ मिडियाले के भूमिका खेलेको छ?
पहिले पहिले सुचना एक-ठाउँबाट अर्को ठाउँमा पुर्याउन धेरै खर्च र समय पनि लाग्थ्यो । अहिले नयाँ मिडियाको विकासले विना खर्च सुचनाहरु एकै पटक हजारौ ठाँउमा पुर्याउन सकिन्छ । ट्वीटरमा ट्वीट गरिसक्दा मिनेटभरमा हजारौले सुचना पाइसकेका हुन्छन् । फेसबुकमा त्यसरि नै सुचना प्रवाह गर्न सकिन्छ ।
नागरिक पत्रकारिता प्रवर्धनको लागि मेरोरिपोर्ट सुरु भएको छ । मेरोरिपोर्ट कस्तो लाग्छ तपाईंलाई ?
‘हरेक नागरिक पत्रकार हुनसक्छ’ यो भनाइलाई पुष्टि गर्न भनौं या नागरिक पत्रकारितालाई प्रर्वद्धन गर्न मेरोरिर्पोट सुरु गरेकोमा इक्वेल एक्सेस धन्यवादको पात्र छ । कसै न कसैले यो सुरु गर्नु आवश्यक पनि थियो किनकी सबै ठाउँमा पत्रकार पुग्दैनन् । त्यस ठाउँका सामाग्रीहरु पनि अरु ठाउँका लागि मार्गदर्शन र प्रेरणाको स्रोत बन्न सक्छ । समाजमा भएका उदाहरणीय कामलाई बाहिर ल्याउनु नै पर्छ त्यसका लागि पनि मेरो रिर्पोटले थालेको नागरिक पत्रकारिता कोशेढुंगा हुन्छ भन्ने लागेको छ ।
केहि सुझाव छन ?
मेरोरिपोर्टले थालेको कार्य सह्रानिय छ । यसले निरन्तरता पाओस् । आगामी दिनमा सर्वसाधारणले यसलाई आफ्नै ठान्ने हुन् सकोस । त्यसका लागि यसले सहभागिता बढाउँनलाई पहल गर्नुपर्ने आवश्यकता छ । भोलीका दिनमा यो एउटा सुचना विचार र सिर्जना साटासाट र अभिव्यक्त गर्ने सशक्त माध्यम हुने निश्चित छ ।
शेखरको ब्लग: http://www.yatrishekhar.com/
शेखरको ट्वीटर ह्यान्डल : @YatriShekhar
Comment by Yatri Shekhar on February 6, 2015 at 5:36pm
अहिले मेरो डोमेन ह्याक भएर उहि पूरानो ब्लगस्पोटमा रहेको जानकारी गराउँछु । मेरो ब्लग स्पोट ठेगाना www.yatrishekhar.blogspot.com
Comment by Yatri Shekhar on July 18, 2012 at 1:49pm
मेरो रिर्पोट टीम र बधाइ दिने सबै शुभ चिन्तकलाइ धन्यवाद
Comment by Kranti Darai on July 17, 2012 at 12:53pm
congratulations Sekhar ji :)
Comment by Indra Dhoj Kshetri on July 13, 2012 at 5:25pm
बधाइ छ शेखर जी !!!
Comment by Binaya Shekhar on July 13, 2012 at 5:10pm
Badhai chha chineko manchhe lai.
Comment by Prakash Lamichhane on July 12, 2012 at 10:07am
बधाइ छ शेखर जी ।
Comment by प्रेम पौडेल (मरूभूमिको यात्री) on July 11, 2012 at 7:19pm
ल ! शेखर ढकाल (यात्री शेखर) जीलाई बधाई छ
Comment by Amuna Chapagain on July 11, 2012 at 3:31pm
Comment by Ajeeta Sigdel on July 11, 2012 at 3:23pm